Abahlinzeki beBonnet neFektri - Abakhiqizi beChina baseChina
Idizayini entsha Usilika bonnet pink solid
Lokhu kusongelwa kwezinwele zikasilika kufaka amaribhoni amade ngemuva ngebhande lokunwebeka kanye nomklamo oyisicaba ngaphambili. Yenziwe ngosilika kamalibhele omsulwa we-100% weBanga 6A ka-16mm, 19 mm, isisindo esingu-22mm, ukunikeza izinwele zakho ukuvikeleka okunethezeka ekulimaleni ebusuku. Igcina umswakama wemvelo wezinwele nokukhanya, ukwephuka okuncane ngenkathi ulele. Ivimbela ukulahleka kwezinwele futhi isize ukukhula kabusha. Igcina isitayela sakho sezinwele sibukeka kahle futhi ivuke ingenakhanda le-frizz / bed. ● Isitayela: I-Classic Silk Night Sleep Cap enamaRibhoni. E ...
Umbala wesiliva webhonethi yesilika
Silk hair cap umbala obomvana
Ubhonethi kasilika ebusuku
Isigqoko sekhanda likasilika
Ingubo yokulala kasilika yezinwele ezisontekile
Umbala wesiliva webhonethi yegolide
Kamalibhele kasilika ibhonethi
Isingeniso Esifushane Sokukhethwa Kwendwangu Ye-polyester Bonnet Yendwangu Engu-100% I-Polyester Usayizi Othandwayo usayizi OWODWA ulingana nosayizi wamakhanda: 50-100cm, Craft Digital iphethini ephrintiwe noma i-Logo efekethisiwe ngombala oqinile, ungqimba olulodwa noma oluphindwe kabili. Ibhendi ye-Head Band Elastic enamaribhoni yenza ukulala ebusuku kuhlale ubusuku bonke, ilungele izitayela ze-anyhair, ezinjenge-curly, ama-wigs, i-straight, i-dreadlock njll. Imibala Iyatholakala Ngaphezu kuka-2 ...
Idizayini entsha ye-poly satin bonnet
Imbali ye-polyester satin bonnet